သနပ်ခါးမေ: အဆီကိုလောင်ကျွမ်းပေးမည့် အစားအစာ ၇ မျိုး (7 Foods That Burn Fat)
By **~ မြတ်ကြည်~** 5:29 PM အစားစာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း (Diet and Exercise)
Diet နဲ့ပတ်သက်လို့ မတင်တာ တော်တော်ကြာသွားပြီမို့ သွယ်ချင်လှချင်သူ စာဖတ်သူ ပျိုမေများအတွက် အဆီကိုလောင်ကျွမ်းပေးတဲ့ အစားအစာတွေကို ဒီတစ်ပတ်မှာ ရွေးပြီး တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
အချက်အလက်တွေကို Carolyn Kylstra ရေးသားတဲ့7Foods That Burn Fat ဆောင်းပါးလေးမှ ကောက်နှုတ်တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကြက်ရင်ပုံသားမှာ ကြွက်သားတွေကို အဓိကတည်ဆောက်ပေးတဲ့ ပရိုတင်း ဓာတ်အများကြီးပါဝင်တယ်။
ကြွက်သားပိုရှိတဲ့သူဟာ မရှိတဲ့သူတွေထက် ပိုပြီး အဆီကို လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ပရိုတင်းကို အစာချေတဲ့ အချိန်ဟာ ကစီဓာတ်ကို ချေချိန်ထက် ပိုကြာမြင့်တာကြောင့် ကယ်လိုရီ ပမာဏအတူတူ စားစေဦးတော့၊ အချိန်ကြာကြာ အစာ ပြည့်တင်းတဲ့ ခံစားချက်ကို ထိန်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။
Greek Yogurt / အဝတ်ပါးဖြင့်စစ်ထားသော ဒိန်ချဉ်
Calcium ဓာတ်နဲ့ Amino အက်ဆစ် တွဲပါတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဟာ အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေထဲကမှ အဆီဖယ်ထားတဲ့ greek yogurt/ strained yogurt ဟာ ပရိုတင်းဓာတ်ပိုပြီးပါဝင်တာကြောင့် fat burn လုပ်မယ်ဆို စားသင့်တဲ့ အစာ တစ်ခုပါ။။
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နှပ်ထားတဲ့ green tea ကို တစ်နေ့ ၂ ခွက် မှ ၄ ခွက် သောက်ရင် သာမန်နေ့ထက် ၅၀ ကယ်လိုရီ ပိုပြီး လောင်ကျွမ်း ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပါဝင်တဲ့ Catechins က ဇီဝဖြစ်စဉ်အရှိန်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး၊ ခါးတစ်ဝိုက်အဆီမစုအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
မနက်စာ ကြက်ဥမွှေကြော် နှစ်လုံး စားပါ။ ပထမတစ်ချက်က အရှေ့ကသိခဲ့တဲ့ အတိုင်း ကြက်ဥမှာ metabolism ကိုမြှင့်ပေးတဲ့ ပရိုတင်းတွေ အများကြီးပါဝင်တာပါ။ နောက်တစ်ချက်က မနက်စာ ကြက်ဥမွှေကြော်စားရင် တစ်နေ့လုံးစားတဲ့ calorie ပမာဏဟာ လျော့နည်းသွားတယ်လို့ စစ်တမ်းများက ဆိုပါတယ်။
ဗိုက်ဆာရင် ရေသောက်ဗိုက်မှောက်နေ ဆိုတာ ကြားဖူးကြမှာပါနော။ ရေခဲရေ သောက်လိုက်တဲ့အခါ ရေခဲရေကြောင့် ကျဆင်းသွားတဲ့ ကိုယ်တွင်းအပူချိန်ကို ပြန်တင်ဖို့ အစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ ရေကိုနွေးသွားအောင် ခန္ဒာကိုယ်က သိမ်းထားတဲ့ engery တွေကို ဖျက်ပြီး အပူစွမ်းအင် ပြန်ထုတ်ပေးရပါတယ်။
Capsacin ဆိုတာ ငရုက်သီးမှာပါတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးပါ။ အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်း တဲ့နေရာမှာ မြှောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ်ပေးတဲ့ သူပေါ့။ ပိန်ချင်တဲ့သူများ တစ်နေ့စာစားတဲ့ ဟင်းထဲမှာ အစပ်နည်းနည်း ထည့်စားပေးနိုင်ပါတယ်။
P.s. ဒါနဲ့ ရခိုင်သူတွေ အဆီမရှိ ကြဘူးနော်။ အစပ်အရမ်းစားလို့နေမယ်။ :)
ဒီ pistachio အစေ့အဆန်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အဆီ၊ ပရိုတင်းနဲ့ အမျှင်ဓာတ် အချိုးကျစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို မြန်ပေးတဲ့အပြင် ဗိုက်မဆာအောင်လည်း ထိန်းပေးပါတယ်။ သားရေစာ တစ်ခုခုစားချင်ပြီဆို ဒါလေးသာကောက်ဝါးလိုက်ပါ။
ဒီဆောင်းပါးလေးက Diet လုပ်ချင်သူ စာဖတ်သူတို့အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ ထွေထွေထူးထူး ရှာဝယ်စရာ မလိုတာမို့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် မနက်ဖြန် ကို ကြက်ဥကြော်နဲ့ စလိုက်ကြရအောင်။ :)
ချစ်ကြည်အေး March 22, 2012 at 6:08 PM
mstint March 22, 2012 at 6:17 PM
ဆုမြတ်မိုး March 22, 2012 at 7:06 PM
ငပိစားပြီးဗိုက်ခေါက်ထူ ရခိုင်သူတွေတို့မယူတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကနောက်ကြသေးတယ်..။
Evy March 22, 2012 at 7:36 PM
အဲဒါတွေအားလုံးကြိုက်တယ်။ ငရုပ်သီးလဲကြိုက်ပါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း မပိန်ပါ:-(
သက်ဝေ March 22, 2012 at 10:19 PM
အများစုက ထင်ထားတာ ကြက်ဥစားရင် ဝတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူးနော်.. အမကတော့ နေ့တိုင်း ကြက်ဥစားဖြစ်တယ်... သိပ်များမယ်ထင်ရင် အနှစ်တလုံးဖယ်လိုက်ပြီး အကာ နှစ်လုံး အနှစ် တလုံးစားတယ်...း)))
ဘရဏီ March 23, 2012 at 12:25 AM
Green Tea နဲ့  ငရုတ်သီး တော့ စားဖြစ်သောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့် Green Tea သောက်ပြီးရင်ဗိုက်တွေအရမ်းဆာလာတယ်။ ကယ်လိုရီတွေအရမ်းလောင်ကျွမ်းသွားလို့ လားမသိဘူး။
ဖြိုးဇာနည် March 23, 2012 at 12:52 AM
နဂိုပိန်ဆိုတော့ အဲ့ 7မျိုးကိုရှောင်မှထင်တယ်။
အင်ကြင်းသန့် March 23, 2012 at 1:22 AM
jasmine(တောင်ကြီး) March 23, 2012 at 2:37 AM
green tea နဲ့ ဒိန်ချဉ် ကိုတော့ပိုပြီးကြိုက်တယ်
မေမြို့မိုး March 23, 2012 at 3:45 AM
အစ်မ.. ကျနော်က အသောက်အစားလည်းမရှိပဲနဲ့ အားကစားဝေးနေလို့ ထင်တယ်.. ဗိုက်ခေါက်ထွက်ပြီး.
camomile March 23, 2012 at 3:59 AM
ဒုတိယနဲ့ တတိယက အမအတွက်အဆင်အပြေဆုံးဘဲ
ချစ်စံအိမ် March 23, 2012 at 4:43 AM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 23, 2012 at 6:55 AM
ဒီထဲက ညွှန်းထားတာတွေ အားလုံးလိုက်နာဖြစ်မဲ့ အစားအသောက်ကြီးဘဲ
ရေတော့ သောက်တာ နည်းတယ်
ဒီမှာက အေးနေတာလည်း ပါတယ်။
ငရုပ်သီးတော့ ကြိုက်မှကြိုက်ရယ်။း)
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်ဥကအဲလောက်မဆုိုးတာသိရတော့ ဒီနေ့ ကြက်ဥစားထားတာပျော်သွားပြီ။
မိစံ March 24, 2012 at 10:37 PM
"၀"ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကောဟင် :P :P
မဒမ်ကိုး March 25, 2012 at 10:26 PM
တွတ်တွတ် April 11, 2012 at 12:12 PM
Please read this. (သနပ်ခါးမေ စာဖတ်သူများသို့)
သတို့သမီးဇာ (Nail Art)
အဆီကိုလောင်ကျွမ်းပေးမည့် အစားအစာ ၇ မျိုး (7 Foods ...
အီးတုံးဆိုင် နှင့် ဒုံဂွမ်ဂွမ်
2012 Oscar မှ Winged Eyeliner များ
ဝက်ခြံ အမာရွတ်တွေကို သက်သာစေမယ့် AC+ Spot care pat...